Hexagonal wire mesh machine Manufacturers & Suppliers | China ezinamacala wire anezikhala umshini Factory
Imikhiqizo yethu eyinhloko yile: umshini ojwayelekile wokusonteka onezinhlangothi ohlangothini olunezinhlangothi, ukusonta okuhle nokubi kwe-hexagonal wire mesh umshini, umshini we-CNC oqondile nombi wokuphotha umshini wocingo, umshini we-gabion wire mesh, umshini osindayo we-gabion wire mesh, ngocingo oluhlabayo umshini womshini, Umshini wokudweba wocingo kanye nochungechunge lwemikhiqizo yemishini yocingo.
Umshini Wokuhambisa Okuncane
Okuzenzakalelayo ezinamacala eziyisithupha wire anezikhala umshini
Umshini we-Chain link kocingo
Okuzenzakalelayo Hexagonal Wire Mesh Machine Hexagonal wire mesh is an wire mesh made of diagonal cut wire mesh (hexagonal) ephothwe ngezingcingo zensimbi. Ububanzi bocingo olusetshenzisiwe buyahlukahluka ngosayizi wocingo olunezinhlangothi eziyisithupha. Ama-grid amancane anezinhlangothi ezinezingqimba zensimbi ezihlanganisiwe ngokuvamile asebenzisa izintambo zensimbi ezinobubanzi obungu-0.4-2.0 mm, kuyilapho ama-grids anongqimba lwe-PVC ngokuvamile esebenzisa izintambo zensimbi ze-PVC ezinobubanzi obungu-0.8-2.0 mm. Lolu hlobo lwenetha olunezinhlangothi lusetshenziswa kakhulu kunetha lokuzihlukanisa lepulazi ...
Hexagonal Wire Mesh Machine Hexagonal wire mesh is an wire mesh made of beveled wire mesh (hexagonal) ephothwe ngezingcingo zensimbi. Ububanzi bocingo olusetshenzisiwe buyahlukahluka ngosayizi wocingo olunezinhlangothi eziyisithupha. Ama-grid amancane anezinhlangothi ezinezingqimba zensimbi ezihlanganisiwe ngokuvamile asebenzisa izintambo zensimbi ezinobubanzi obungu-0.4-2.0 mm, kanti lezo ezinesendlalelo se-PVC ngokuvamile zisebenzisa izintambo zensimbi ze-PVC ezinobubanzi obungu-0.8-2.0 mm. Lolu hlobo lwenetha olunezinhlangothi lusetshenziswa kakhulu kunetha lokuhlukaniswa kwamapulazi, idlelo ...